1100 Grade Cookware Aluminium Circles, Utensils Recycling Aluminum Circle Plate - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co, Ltd
Manolotra karazana Aluminium ho an'ny fitaovana ho an'ny mpanjifantsika isika. Ny vokatra azonay dia novolavolain-dry zareo matihanina amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta sy fitaovana tsara indrindra azo avy amin'ny mpivarotra azo itokisana. Noho ny fangatahana avo lenta, ny vokatra azonay dia misy amin'ny fomba maro samihafa. Manana safidy lehibe isika mba hanolorana amin'ny teny hoe Gauge sy Sizes amin'ny mpanjifa. Ireo faribolan'ny alim-bary natolotr'i antsika dia nampiasaina tamin'ny endriny madio ho an'i EG tao Hindalco. Ity sehatra ity dia ilaina ho an'ny Deep Draw, Anodizing & Hard Anodizing. Manolotra malefaka, tratra mafy, Half-hard, Full hard Tsy manadino sy mampiray ny natiora.
Nataonay anay dia singa goavam-be misy alika Aluminium Pure Grade. Ny tolotra omen'ny antsika dia natao amin'ny fitadidiana ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny fitaovana tsara kalitao dia ampiasaina amin'ny dingana famokarana ka ny vokatr'izy ireo dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Sizes: 8 - 36 "miaraka amin'ny 20, 19, 18, 16, 14, 12 & 10 Gauge
Manolotra karazana karazany anankiroa isika, izany hoe ny Spinning Quality & Pricing Quality
Aluminium Non-Stick amin'ny lokony
Ny Quality Quality Hot Rolling Aluminum Cookware Circle For Deep Drawing, fitsaboana